Isimboli sokukhusela kwabasebenzi bezoNyango kunye nabaNcedisayo
Ngaba isiphambano esibomvu esisetyenziswe njengesimboli se- American Red Cross kunye ne-International Red Cross isimboli samaKristu kwaye ngaba le mibutho yamaKristu impawu? Le mibutho yasungulwa njengemibutho yehlabathi, yoluntu, eyahlukana noorhulumente kunye neecawa. Iziphambano sele zisetyenziswe njengempawu ngaphandle kobuKristu. Okanye, njengalolu hlobo, kukho amanyathelo amancinane athatyathwe kwimiqondiso yakhe yobuKristu yokuqala.
Namhlanje, umnqamlezo obomvu uyisimboli sokukhusela esetyenziselwa abasebenzi bezonyango kunye nabasebenzi boovimba beemfazwe kwimimandla yemfazwe nakwiindawo zeentlekele zemvelo. Kukwasetyenziswa ngokubanzi ukukhetha uncedo lokuqala kunye neenkonzo zonyango, ngaphandle kokusetyenziswa kwayo yi-International Cross Cross kunye neminye imibutho.
Ukuzalwa Kwesizwe soMnqamlezo Olubomvu
IiNdaba zeMedia zichazwe ngo-2006 ukuba i-website ye-American Red Cross yathi isimboli somnqamla obomvu kwimvelaphi emhlophe yayiyi-flag yeSwitzerland, ilizwe elaziwa ngokungathathi hlangothi kunye nekhaya lomseli we-Red Cross, uHenry Dunant . Kwaqatshelwa njengombonakalo okhuselekileyo wokusetyenziswa kwimiba engqubuzanayo, ukubonisa ukungathathi hlangothi kunye nomsebenzi wobuntuntu kubasebenzi babo bokunceda kunye nezixhobo.
Umnqamla omhlophe kwilagi yaseSwitzerland yavela kwi-1200s ngokuthi "isimboli sokholo lobuKristu," ngokweSwitzerland Embassy eUnited States. Nangona kunjalo, i-Red Cross yasungulwa njengentlangano yehlabathi, engekho inkolo, kwaye ayifumani nto yobuKristu njengesizathu sokwamkela isimboli.
Umsunguli we-Red Cross, uHenry Dunant, wayengumrhwebi waseSwitzerland owaye wakhulela kwi-Calvinist e-Geneva, eSwitzerland. Wayechaphazeleka kakhulu ngamehlo angama-40,000 awonzakeleyo kunye namafa afa kumfazwe eSolferino, e-Italiya, ngo-1859, apho wayefuna abaphulaphuli kunye neNapolean III kwimicimbi yezoshishino.
Uncedise ukuququzelela abahlali ukuba bancede amajoni amanxeba kunye nokufa.
Oku kwakhokelela encwadini kwaye ngokokuqala kwiNgqungquthela yamazwe ngamazwe kunye ne-Geneva Convention ngowe-1864. Uphawu lovulo olubomvu kunye negama lwamkelwa kule nhlangano encedisayo eya kunika uncedo kubo bonke.
I-American Red Cross yasungulwa nguClara Barton, owamkela urhulumente wase-United States ukuba avumele iSivumelwano saseGeneva. Njengombutho wamazwe ngamazwe, ayinayo inxulumano yecawa.
I-Red Crescent yasetyenziselwa endaweni yeRussia-Turkish War ukusuka ngo-1876-78. Ubukhosi base-Ottoman, isizwe samaSilamsi, sichasa ukusetyenziswa komnqamlezo obomvu, apho badibanisa neempawu zabanquli-medieval medieval. Yenziwe uphawu olusemthethweni phantsi kweeNdibano ze-Geneva ngo-1929.
U- Bill O'Reilly weMidiya uhlalutye xa esebenzisa i-Red Cross njengomzekelo wesimboli samaKristu ukuchasa ukususa umda omkhulu wamaKristu ukusuka eMat. Soledad eSan Diego. U-O'Reilly akayena mntu kuphela ocinga ukuba umnqamlezo obomvu ungumnqamlezo ongumKristu. Ukuba isithuthi sibonisa umnqamlezo obomvu kunokuba i-crescent ebomvu, inokujoliswa njengemoto yobuKristu kwindawo engafanelekanga kwindawo yokulwa.
Ngaloo ndlela, amaKristu afana noBill O'Reilly azama ukukhusela amaKristu enza iimpazamo ezifanayo njengama-terrorist angamaKristu angathanda ukuhlasela ubuKristu.
Iingxoxo eziPhambili zeAtists
Ukukholelwa kuThixo kunye noKhuselo: Yintoni eyahlukileyo?
Ngaba Zikhona Ukholo LwamaKristu?
I-Whale Pelvis: Ziziphi ii-Vestigial Organ Say About Evolution
I-Ohio Dominican University Admissions
10 Amazwi malunga neVelociraptor
Ngaba Iingelosi Zindoda okanye Abesifazana?
Iimpawu zokuqala zomsindo we-Original Original ukususela ngo-1998
Iimpawu eziziwayo zibambe i-Mirror kuMoya waseMelika
Iinkcukacha ze-Intanethi ze-French-Canadian Ancestry
I-Decay of Friendship, nguSamuel Johnson
Kutheni iAerate Wine? Inzululwazi Yenza Iwayini Iphefumla
Oko Ukwenza Xa Izibane Zakho Zokubhukuda Azisebenzi